ဘလော့ | Join4Biz
ဇြန္လ 1, 20190မှတ်ချက်များ
သင်တစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကဘာလဲရာခိုင်နှုန်းပေးရမည်နည်း ကျနော်တို့မေးခွန်းအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောစကားသံကိုကွားချင်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အမေရိကန်, တရုတ်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယကနေ business အပေါင်းအဖေါ်များ & ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ? သငျသညျကြိုက်တတ်တဲ့အရာ? ဤသည်လူအပေါင်းတို့အားပွင့်လင်းမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အောက်တွင်သင့်အဖြေကိုစွန့်ခွာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ကျနော်တို့ကိုသူတို့သူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်ခဲ့သူတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုဝေမျှဖို့လုပ်ငန်းရှင်များ '' အဖွဲ့အစည်း (EO) ၏အဖွဲ့ဝင်များကိုမေးခဲ့တယ်။ 1 ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်အတူတကွစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မသွားမီကြောင်းလူတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, "အတူတကွပထမဦးစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အကြှနျုပျ၏လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ကျွန်မ 12 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအလုပ်မှာအတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက [ ... ] ဆက်ဖတ်ရန်
ဧပြီလ 25, 20190မှတ်ချက်များ
Apr. 6th, အမေရိကန်ရေရှည်တည်တံ့ Sneaker အမှတ်တံဆိပ် Allbirds ရှန်ဟိုင်းရဲ့ Taikoo Hui စျေးဝယ်ကုန်တိုက်မှာတရုတ်နိုင်ငံတွင်၎င်း၏ပထမဆုံးဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်။ 2016 ခုနှစ်, Allbirds သိုးရဲ့မွေးရာမှဖန်ဆင်းသိုးမွှေး Runners ခေါ်ဖိနပ်၏တစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားနှင့်အတူစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ [ ... ] သစေသည်အနေနဲ့ Eco-friendly ကုမ္ပဏီ "ကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင်ပြေဖိနပ်," နှင့်စတိုင်အဖြစ်သူ့ဟာသူ branded ဆက်ဖတ်ရန်